Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment सरकारसँग ८ बुँदे सहमतिपछि तोडियो डा. केसीको १९ औं अनशन (भिडियोसहित) - Pnpkhabar.com
सरकारसँग ८ बुँदे सहमतिपछि तोडियो डा. केसीको १९ औं अनशन (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २५ असोज : डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएसँगै अनशन तोडेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ गतेदेखि अनशन बसेका डा. केसीसँग सरकारले मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति गरेसँगै उनले अनशन तोडेका हुन् ।
उनले कोरोना जितेका शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर १९ औं अनशन तोडेका हुन् । अनशन तोडे लगत्तै डा. केसीलाई अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको छ ।
गएराति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको व्यवस्था गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आउँदो संसद् अधिवेशनबाट एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तयार गरी २०८० फागुन १० भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत ८ बुँदामा सहमति भएपछि उनको २८ दिन लामो अनशन तोडेका हुन् ।
यसैबीच सरकार र डा. गोविन्द केसीबिच सहमति भएसँगै आवासीय चिकित्सकले (आज) आइतबारदेखि थाल्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ताको घोषणा गरेको छ । शनिबार अबेरसम्म पनि डा. केसीको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आइतबारदेखि आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ताको घोषणा गरेको हो ।